दुई वर्षमा थपिए १ करोड ४६ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता - अनलाइन डिजिटल समाचार : Shreepage TV
श्रीपेज २३ माघ २०७८
दुई वर्षमा थपिए १ करोड ४६ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता
२३ माघ, काठमाडौं । विगत दुई वर्षमा नेपालमा इन्टरनेट सस्क्राइबरको संख्या करिब डेढ करोडले बढेको छ । २०७६ मंसिरयता मात्रै १ करोड ४६ लाख ६७ हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसमा फरक इन्टरनेट कम्पनीको सेवा लिइरहेकाहरु एउटा ग्राहकलाई पनि ‘युनिक प्रयोगकर्ता’का गणना गरिएको छ ।
२०७६ मंसिरमा २ करोड १३ लाख ७३ हजार रहेको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या अहिले जनसंख्या भन्दा बढी ३ करोड ६० लाख ४१ हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआईएस रिपोर्टले देखाउँछ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार जनसंख्यनको अनुपातमा ११८ प्रतिशत जनता इन्टरनटको पहुँचमा छन् । कतिपय एकै व्यक्तिले दोहोरो रुपमा गरिरहेको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या जनसंख्याभन्दा धेरै देखिएको हो ।
प्राधिकरणको एमआईएस रिपोर्टअनुसार अहिले इन्टरनेट बजारमा मोबइाल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटकै दबदबा छ । तर, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डतर्फ पनि ग्राह तीव्र दरमा बढेका छन् ।
२०७६ मंसिरमा मोइबल इन्टरनेटको बजार ७८ प्रतिशत र फिक्स्ड लाइनट इटरनेटको २१ प्रतिशत थियो । अहिले मोबाइल इन्टरनेटको बजार घटेर ७४.६३ प्रतिशत र फिक्स्डलाइनको बढ्दै २४.७७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
यो अवधिमा नेपाल टेकिलमको एडीएसल प्रयोगकर्ता ९ लाख ६६ हजारबाट घटेर ६ लाख ४२मा झरेको छ । तर, फाइबर इन्टरनेटका प्रयोगमर्ता ३६ लाख १५ हजारबाट बढेर ८२ लाख ८१ हजारमा पुगेको छ ।
यो अवधिमा मोइबल इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या करिब १ करोड ४ लाखले वृद्धि भयो । २०७६ मंसिरमा १ करोड ६५ लाख ६१ हजार रहेको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या अहिले २ करोड ६९ लाख ३ हजार पुगेको छ ।
बजारमा केबल र फाइबर इन्टरनेट सेवा दिने ४० वटा कम्पनी छन् । ताररहित र तारसहितका फिक्स्ड लाइन सेवा दिने सबैजसो कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा ठूलो संख्यामा ग्राहक संख्या विस्तार गरेका थिए ।
स्मार्टफोनको प्रयोगले मोबाइलमा इन्टरनेट जोड्नेको संख्या पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ । यो अवधिमा थ्रीजी इन्टरनेट छाडेर फोरजीमा जानेको संख्या ठूलो देखिन्छ । कमजोर गुणस्तरका सेवाप्रदायक र प्रविधिलाई माहामारीका बेला थुप्रै ग्राहकले छाडे । नेपाल टेलिकमको एडीएसएल छाडेर फाइबर इन्टरनेटमा धेरै ग्राहक तानिनुले यो पुष्टि गर्छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले ‘आइस्पान’ महामारी सुरु भएपछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उछाल आएको बताउँछ । महामारीमा ‘वर्क फर्म होम’ फस्टाउँदा इन्टरनेट ग्राहक थपिएको हुन् । मोबाइल डाटाले काम चलाएकाहरुलाई फिक्स्ड लाइन इन्टरनेट जरुरत पर्‍यो ।
महामारीमा घरबाटै काम गर्नेहरुले डेटाभन्दा छिटो र गुणस्तरीय भएकाले पनि फाइबर अप्टिक इन्टरनेट जोडेको कम्पनीहरु बताउँछन् । युट्युब, टिकटक, फेसबुक जस्ता साइटमा भिडियो सामग्री हेर्नुपर्ने अवस्थाले पनि इन्टरनेट नजोडी घरमा बस्न नै मुस्किल भइदियो ।
घरबेटी वा छरछिमेकको इन्टरनेटबाट काम चलाएकाहरुले पनि यो अवधिमा इन्टरनेट सेवा जोडका छन् । पछिल्लो वर्ष गाउँका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय लगायतमा सरकारले नै इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलको फोरजी प्रतिस्पर्धा गाउँसम्म पुग्दा इन्टरनेट सेवा विस्तार र प्रयोग बढेको हो ।
सावधान ! सेल्फीले कुरुप बनाउँछ अनुहार, बढाउँछ डिप्रेसन
अन्तरिक्ष पर्यटनमा नयाँ कीर्तिमान, ६ व्यक्तिले एकसाथ गरे अन्तरिक्ष यात्रा !
अब एप्पलले मर्मत गर्ने छैन यी आइफोन
ट्वीटरसँग एलन मस्कको खटपट, आफ्नै नयाँ सोसल मिडिया ल्याउँदै